WAR DEG DEG AH: M/weynaha Puntland oo kusugan Saldhiga Ciidamada Badda Puntland, kulan albaabadu u xiran yihiina la leh Saraakiisha ciidamada. – Puntlandtimes
WAR DEG DEG AH: M/weynaha Puntland oo kusugan Saldhiga Ciidamada Badda Puntland, kulan albaabadu u xiran yihiina la leh Saraakiisha ciidamada.
BOOSAASO(P-TIMES) – Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa hadda kusugan gudaha Saldhiga tababarada ciidamadda Badda Puntland oo kuyaala deegaanka QAW ee duleedka Boosaaso, wuxuuna shir albaabadu u xiran yihiin la leeyahay Saraakiisha ciidamada ee Soomaalida & Imaaraatka Carabta iskugu jirta ayna ka wada hadlayaan waxyaabihii dhacay.
Wariyaasha oo la socda Madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in uu Madaxweynaha lagu wargaliyey in uu hadli doono, marka ay dhamaato booqashada uu hadda ku marayo qeybaha kala duwan ee Saldhiga ciidamada badda Puntland.
Warar hordhac ah ayaa sheegaya in uu Madaxweynaha Puntland cadeyn doono mawqifkiisa ku aadan xaaladda Imaaraatka Carabta, uuna si rasmi ah u sheegi dooni in aysan marnaba yeeli doonin wax dhibaato ku ah xariirka u dhaxeeya Puntland iyo Imaaraatka, kaas oo ah mid mudo dheer soo taagnaa.
Saraakiisha Imaaraatka Carabta ee kusugan Saldhigan ayaa shalay ku dhawaaqay in aysan ka bixi doonin xarumahooda tababarada ee Puntland, ayna sii wadayaan tababarada ay siinayaan iyo taakulada ciidamadda badda.